Paris Saint-Germain Oo Sare U Qaaday Qiimaha Ay Ku Dooneyso Xidigaha Paul Pogba
Home Wararka Ciyaaraha Paris Saint-Germain oo sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Xidigaha Paul...
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay raadineyso inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan.
28 jirkaan ayaa galaya sanadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa inkastoo Red Devils ay jeclaan laheyd inay sii heysato, ma jiro wax heshiis ah oo wali qandaraaska loo kordhiyo.
Mauricio Pochettino ayaa isha ku haya inuu ciyaartoy badan u qoro caasimada Faransiiska xagaagan, ka dib markii uu durbaba ku tartamay heshiisyada Gianluigi Donnarumma , Sergio Ramos , Georginio Wijnaldum iyo Achraf Hakimi .
Sida laga soo xigtay Daily Mirror , PSG ayaa rajeyneysa inay ka soo qaadato ugu yaraan 50 milyan ginni iibinta ciyaartoyda, taasoo ay markaas u adeegsan karto inay ku soo iibsato Pogba, kaasoo ay dooneyso inay sameyso saxiixooda.
Pogba ayaa la rumeysan yahay inuu wadahadal la yeeshay PSG isla markaana uu ku dhow yahay inuu heshiis shaqsi ah la gaaro , in kasta oo uusan weli xiriir rasmi ah la sameyn kooxda Faransiiska iyo United.
Haddii PSG ay ku guuldareysato raacdada ay ugu jirto Pogba, markaa waxay u badan tahay inay dareenkeeda u jeediyaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rennes Eduardo Camavinga , kaasoo sidoo kale ay isha ku hayaan kooxda Ole Gunnar Solskjaer.
Pogba, oo sidoo kale lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Juventus , ayaa 42 kulan u saftay tartamada oo dhan United xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyay lix gool, sagaalna caawiye ka ahaa.
Previous articleRaphael Varane oo doonaya inuu dhameystiro heshiiska uu ugu biirayo Man United maalmaha soo socda.
Next articleReal Madrid oo soo bandhigtay David Alaba una dhiibtay Numberka uu Xiran jiray Daaficii..